दुई बलिया बैंकहरु आपसमा गाभिने प्रयासमा, एनएमबी र ओमको स्वाप रेसियो कति ? « Nepal Bahas
दुई बलिया बैंकहरु आपसमा गाभिने प्रयासमा, एनएमबी र ओमको स्वाप रेसियो कति ?
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:२५
काठमाडौं । एनएमबी बैंक लिमिटेडले ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ती गर्ने भएको छ । आज दिउँसो होटल अन्नपूर्णमा यी दुई बैंकबीच एक अर्कामा गाभ्ने–गाभिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारी भइरहेको छ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई केही समय पहिले प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले एक्विजिशन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ओम र प्राइमबीच भएको सम्झौता भाँडिएपछि आज फेरि एनएमबी बैंकले प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी सम्झौता हुँदैछ ।
अब हुन लागेको सम्झौता अनुसार ओम र एनएमबी दुबै बैंकले तीन महिनाभित्र मर्जर प्रक्रिया सकेर एकीकृत कारोबार सुरु गर्नेछन् । प्राइमसँग सम्झौता भाँडिएपश्चात राष्ट्र बैंकले दुबै बैंकलाई तीन महिनाभित्र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्न निर्देशन दिएको थियो।
हाल स्वाप रेसियोको टुङ्गो लागिसकेको छैन। ओम डेभलपमेन्ट बैंकले मागेको १००ः ८० को स्वाप रेसियोमा मोटामोटी सम्झौता भएको छ । दुबै बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (डिडिए) पश्चात आउने नतिजा अनुसार १० अंक थपघट हुनसक्ने गरि दुबै बैंकबीच सम्झौता भएको छ ।
प्राइम बैंकसँग एक्वीजिशनमा बोनस घोषणाले उत्पन्न गराएको दरार कर्मचारी समायोजनमा कुरा नमिलेपछि प्रक्रिया भाँडिएको थियो। एनएमबी बैंकको व्यवस्थापनले प्राइमको समस्या नदोहोरिने आवश्वाशन दिएपछि ओम एनएमबी बैंकमा विलिन हुन राजी भएको हो ।
हाल एनएमबी बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ६१ करोड रहेको छ भने पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रियस्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५१ करोड रहेको छ । यदि दुवै बैंक आपसमा मिलेको खण्डमा चुक्ता पूँजी १२ अर्बमाथि पुग्नेछ ।
मर्जरपछि बन्ने एकीकृत बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हालका एनएमबी बैंकका सीइओ सुनिल केसी र ओम डेभलपमेन्ट बैंकका विश्वमोहन अधिकारी डेपुटी सीइओ बन्ने मोटामोटी सल्लाह मिलेको छ ।
एनएमबी बैंक विगत लामो समयदेखि प्रदेश नम्बर ४ मा आफ्नो मजबुत उपस्थितिको लागि प्रयास गरिरहेको थियो । सोही कारण प्रदेश ४ मा आफ्नो पकड राख्न सफल ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्न एनएमबी बैंक तयार भएको हो । एनएमबीले केही समयअघि गरिमा विकास बैंकसँग एक्वीजिसनको छलफल अगाडि बढाएको भएपनि त्यो छलफल निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।